Ahoana Ny Fiantraikan’ny El Niño Tamin’ireo Faritra Maina ao Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Ahoana Ny Fiantraikan'ny El Niño Tamin'ireo Faritra Maina ao Myanmar
Voadika ny 09 Mey 2016 9:24 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, বাংলা, Ελληνικά, Español, Nederlands, 日本語, Aymara, Français, Esperanto , नेपाली, English
Ankizy mandehandeha eny amin'ny renirano maina ao amin'ny tohodranon'i Thaminekham akaikin'i Aung Ban tamin'ny 28 Aprily 2016. Sary avy amin'i Jpaing / The Irrawaddy
Ity lahatsoratra ity dia avy amin'ny Irrawaddy, tranonkalam-baovao tsy miankina ao Myanmar, ary navoaka eto amin'ny Global Voices indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Mangatsiaka kokoa ny faritra tendrombohitra ao amin'ny Fanjakana Shan noho ny faritra maina ao Myanmar afovoany sy ambany kokoa, na dia tamin'ity taona ity aza, tahaka ireo firenena hafa, nijaly ny trangana toetr'andro tsy mahazatra El Niño mahery vaika izy .
Ao amin'ny faritra atsimon'ny Fanjakana Shan, maina avokoa nanomboka tamin'ny volana Febroary ireo loharano sy farihy fampiasan'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana hitehirizana ranon'orana ho an'ny tokantrano sy ho an'ny fambolena ihany koa, ka nahatonga ireo mponina maro miatrika tsy fahampian-drano izay ratsy kokoa noho ny teo aloha. Manazava ny zava-misy ao amin'ny faritr'izy ireo i Tun Kyi, filohan'i Tanàna Le Gaung ao amin'ny kaominina Kalaw:
Maina ny farihy ao akaikin'ny tanànanay roa volana lasa izay. Afaka nampiasa rano tao hatramin'ny volana Martsa izahay tamin'ny taon-dasa
Mba hiatrehana ny tsy fahampian-drano, nanomboka nizara rano fisotro tao an-tanàna ny fikambanana mpanao asa soa eo an-toerana, toy ny Fondation Brighter Future (Orina Mpanasoa Hoavy Mamiratra kokoa) ao Myanmar. Ny fikambanana izay hany tokana ao amin'ny Fanjakana Shan izay mandavaka vovo (lava-drano) ao amin'ny faritra tena voa mafy dia niara-niasa tamin'ny fitondram-panjakan'i Myanmar nanomboka tamin'ny taona 2014, ary nahazo fitaovana handavahana ny lembalemba be vatosokay indrindra ao Shan. Nilaza ny fikambanana fa vao avy nandany 1,5 tapitrisa dolara Amerikana izy mba hividianana fitaovana fandavahana azy ireo manokana ka afaka nandavaka lava-drano maherin'ny 100 tao amin'ny Fanjakana Shan izy ireo hatramin'izao.
Farihy mihamaina ao amin'ny kaominin'i Pindaya ao Atsimon'ny Fanjakana Shan tamin'ny 28 Aprily. Sary avy amin'i Jpaing / The Irrawaddy
Mponin'i Lel Gaung ao atsimon'ny Fanjakana Shan, manangon-drano tamin'ny fiara misy siniben-drano izay notohanan'ny tetikasan-dranon'ny Fikambanana Brighter Future Myanmar. Sary avy amin'i Jpaing / The Irrawaddy
Mpikambana ao amin'ny Fikambanana Brighter Future Myanmar nizara rano tao amin'ny tanànan'i Naung Bote akaikin'i Taunggyi. Sary avy amin'i Jpaing / The Irrawaddy
Lehilahy matsaka rano ao amin'ny siniben-dranon'ny vondrom-piarahamonina ao Aung Ban. Sary avy amin'i Jpaing / The Irrawaddy